crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Runta madow ee ka danbeysa Mashruuca La Dagaallanka Burcad-badeedda | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka March 22, 2016	0 187 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Kacaankii Siyaad Barre sanadkii 1991, cududdii xoogga dalka ee dalka iyo hantida umadda qeybo kala duwan ka difaaci jiray ayaa go’ay—waxaana dalku noqday mid beylahan oo cidla ciirsada.
Ciidamadii badda ee Soomaaliya oo kahor intaanay burburin cadowga iyo damaaciga shisheeyaha ka yureyn jiray badaheenna ayaa kamid ah qeybihii xoogga dalka Soomaaliyeed ee sida la taaban karo loo tabay wax-qabadkoodii.
Burburkii iyo barakicii gudaha waxaa kasii boholyow darnaa hantidii aynu ogaal la’aan ku ilaashan weynay gaar ahaan dihinta iyo kheyraadka badaheenna.
Hubaasha ah in dalkani uu dhibane u yahay damaaciga shisheeyaha, waxaa kusii jirtaa mahadhooyin kale oo si cad loola arkay berri iyo bad labadaba.
Si kastaba, sanado kahor ayaa dunida laga maqlay wax loogu yeeray burcad-badeed Soomaaliyeed oo xeebaha geeska Afrika ka qowleysta.
Ereyga burcad-badeed oo afka qalaad lagu yiraahdo piracy, ma ahan Soomaalida oo kaliya dadkii ugu horreeyey ee loo adeegsado.
Qarniyadii dhexe ayay aheyd markii Viking-kii reer Scandanavia ama bad-mareennadii Portugese-ka ay falal burcad-badeednimo oo dhac iyo dilba iskugu jira ku qafaalan jireen maraakiibta.
Si hadaba, loo dhimo falalka burcad-badeednimo ee xeebaha geeska Afrika ayay gaashaan buurta NATO iyo dal—alla dalkii raba—uu ruqsad sharci-darro ah u soo qaatay la dagaallanka bucad-badeedda Soomaalida.
In kasta oo ay dib usoo korayaan tayada iyo tirada ciidamada badda ee XDS, hadana ilaa xad tabartoodu ma gaarsiisna inay ku filnaadaan ilaalinta biyaheenna—waana arrintan iyo kuwa kale waxa qasbay in dal-kasta uu kusoo biiro mashruuca la dagaallanka burcad-badeedda.
Dal—dowladdiisu caqabado dhowr ah oo halis ku ah jiritaankeeda uu lugaha ka dabray, badbaadinta biyaha Soomaaliya ahmiyad buuran kuma fadhido.
Hayeeshe, inta dib loo qalqaalinayo tayeynta ciidamadda badda ee dalkeenna, kheyraad dhan oo ah hibo Alle gaar nooga dhigay ayaa ku lumi doona mashruuca la dagaallanka Burcadbadeedda ee ay wadaan dalalka aan cidi dooran ee iskood isku xushay.
Previous: Muslimku ma xumaado: Tuug halkii laga xiri lahaa xoriyad maaliyadeed loogu deeqay!
Next: Maxayna dhex-maray: Ma dagaal sokeeye mise daqar sokeeye?!
Muqdisho – Magaalo Kobaca Ilbaxnimada Aqriska uu kusii xoogeysanayo.